Deegaanka Yaaqbari-weyne Ee Gobolka Shabellaha Hoose Ayaa Al-Shabaab Maanta Xoog Kula Wareegeen – STAR FM SOMALIA
Deegaanka Yaaqbari-weyne Ee Gobolka Shabellaha Hoose Ayaa Al-Shabaab Maanta Xoog Kula Wareegeen
Xoogaga Ururka Al Shabaab, ayaa aroornimadii hore ee saakay weerar culus ku qaaday Deegaanka Yaaqbari-weyne Ee Gobolka Shabellaha Hoose, waxaana u suurta gashay inay la wareegan gacan ku haynta Deegaankaasi.
Yaaqbari-weyne, ayaa waxay ka tirsan tahay Degmada Wanlaweyn, waxayna ku taallaa inta u dhaxeyso Leego & Garoonka Balli-doogle, waxaana fariisimo ku lahaa Ciidanka Dowladda Somaliya, iyadoo aynaan Amisom deganayn.
Xoogaga Al Shabaab, ayaa xilligii Salaadda Subax laba jiho ka soo weeraray Deegaankaasi, iyagoo iska caabin kulul kala kulmay Ciidamada Dowladda, dagaalku wuxuu soo gaaray 7-dii subaxnimo.
Ciidanka Dowladda oo hujuum xoog badan kala kulmay Shabaabka, ayaa waxay taasi keentay inay isaga soo baxaan Yaaqbari-weyne, iyagoona u ruqaansaday dhinaca Garoonka Balli-doogle, oo Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ay degan yihiin.
Ururka mayalka ee Al Shabaab, ayaa dagaalka kula wareegay ugu yaraan laba ka mid ah gaadidka dagaalka ee Ciidamada Dowladda, halka mid kalana ay ku gubeen. Sidoo kalana uu jiro hub ay ka qabsadeen Ciidamada.
Cali Nuur Maxamed, Gudoomiye Ku Xigeenka Dhinaca Ammaanka Ee Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, ayaa xaqiijiyay in Shabaabku ay dagaal culus kula wareegen Deegaankaasi, markii buu yiri ay xeelad ahaan uga soo gurteen Ciidamada Dowladda.
Cali Nuur oo la hadlay StarFm, ayaa sidoo kale xaqiijiyay Shabaabku inay gubeen mid ka mid ah gaadiidka dagaalka ee Ciidamada Dowladda, halka ay ku qabsadeen laba gaari oo kale.
Sarkaalkan oo ka gaabsaday khasaaraha Ciidanka Dowladda ka soo gaaray dagaalka, ayaa tilmamay in khasaaro uu jiro, laakiin ay dib ka soo sheegi doonaan. Waxa uu intaa ku daray inay wadaan abaabul ay dib ugu qabsanayan Yaaqbari-weyne, sida uu yiri.
Maqribnimadii xalay, ayay ahayd markii Xoogaga Ururka Al Shabaab ay si nabdoon kula wareegen Degmada Janaale, xilli ay isaga baxeen Ciidamada Amisom. Sidoo kale 4-tii bishan ayay dib ula wareegen Degmada Kuntuwaarey, markii Amisom ay soo baneysay.
Mintidiinta Al Shabaab, ayaa waxaa kuu muuqanayso inay culeys ku hayaan Gobolka Shabellaha Hoose, marka loo eeggo Gobolada Koonfurta & Bartamaha Somaliya, kuna sugan tahay Dowladda.
Wararka Ka Imaanaya Magaalada Kismaayo Ayaa Sheegaya In Toddobo Askari lagu Toogtay
Magaalada Baladweyne Ee Gobalka Hiiraan Ayaa Haweeney saygeeda ku dishay
Maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland gaar ahaan Guddiyadooda doorashooyinka ayaa waxaa lagu wadaa inay soo bandhigaan Guddiyada soo xulista Ergada dooraneysa min Saddex Kursi ee Golaha Shacabka, kuwaas oo dhawaan doorashadooda la shaaciyay
Maamulka Koonfur Galbeed oo ugu horreeya ayaa la filayaa inay shaaciyaan Maanta oo Khamiis ah Guddiga soo xulista Ergada Saddexda Kursi oo doorashadooda lagu qabanayo Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay, halka Sabtida oo taariikhdu ku beegan tahay 22 Bisha Janaayo ay ku dhaqaaqi doonaan Tababarida Guddiga iyo soo gudbinta Ergooyinka.
Dhinaca kale Guddiga doorashooyinka Heer Dowlad Goboleed ee Jubbaland ayaa Maalinta Sabtida h oo taariikhdu ku beegan tahay 22 Bisha Janaayo ay shaacin doonaan Guddiga soo xulista Ergada Saddexda Kursi oo doorashadooda lagu qabanayo Magaalada Kismaayo, halka Maalinta kuxigta ee Axadda ah ay geli doonaan soo diyaarinta liisaska Ergooyinka.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa shalay Magaalada Baydhabo ku qabtay doorashada 5 kursi, waxaana sidoo kale la filayaa in Maamulka Jubbaland uu Magaalada Kismaayo ka bilaabo doorashada Xildhibaannada Golaha Shacabka.
Xarunta Teendhada Afisyooni ee Magaalada Muqdisho Waxaa ku soo dhammaatay doorashada Guddoomiyaha cusub ee Guddiga Xallinta Khilaafaadka doorashooyinka dadban, kadib markii xilka Laga qaaday Guddoomiyihii hore ee Guddigaas.
Doorashada xilka Guddoomiyaha Guddiga Khilaafaadka ayaa waxaa isku soo sharaxay laba Musharax oo kala ahaa Maxamed Cawil Warsame iyo Mustaf Macalin Cali, balse inta aysan bilaaban doorashada ayaa waxaa tanaasulay Musharax Mustaf Macalin.
Xubnaha Guddiga Khilaafaadka ayaa Cod gacan taag ah ugu coddeeyay, kuna doortay in Guddoomiyaha cusub ee Guddiga Xallinta Khilaafaadka doorashooyinka uu noqdo Maxamed Cawil Warsame oo kamid ah xubnaha Guddigaas.
Maalmo kahor ayaa waxaa Teendhada Afisyooni ee Garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho ka dhacday doorashada Guddoomiyaha cusub ee Guddiga doorashooyinka heer Federaal, waxaana xilkaas ku guuleystay oo loo doortay Muuse Geelle Yuusuf oo bedelay Guddoomiyihii hore ee Maxamed Xasan Cirro.
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Xukuumadda xilgaarsiinta Cabdisaciid Muuse Cali, ayaa maanta oo Khamiis ah waxa uu Xarunta Wasaaradda ku qaabilay Danjiraha Dowladda aynu saaxiibka nahay ee Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha, Mudane FEI Shengchao, oo booqasho ugu yimid.
Wasiirka iyo Danjiraha ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladda Shiinaha ee dhinacyada siyaasadda, amniga, la dagaallanka argagixisada, horumarinta, dhaqaalaha iyo arrimaha Gobolka Geeska Afrika.
Sidoo kale, waxaa kulanka diiradda lagu saaray sidii ay dowladda Soomaaliya iyo Dowladda Shiinuhu u wada bilaabi lahaayeen mashaariic horumarineed oo laga fulinayo dalka, kuwaas oo qayb ka ah iskaashiga dhinacyada badan ee ka dhexeeya labada dal, si looga dhabeeyo himilooyinka qaran ee labada Shacab ee saaxiibbada ah.
Danjiraha Shiinaha ayaa tilmaamay in ay Soomaaliya u tahay saaxiib istaraatiiji ah, isaga oo hoosta ka xarriiqay sida ay Dowladda Shiinaha uga go’an tahay sii wadidda taageerada ay u hayaan dowlad-dhiska Soomaaliya iyo ixtiraamka midnimada iyo madax-bannaanida dowladda iyo Shacabka Soomaaliyeed.
Dhanka kale, Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Xukuumadda Federaalka ee xigaarsiinta Cabdisaciid Muuse Cali ayaa uga mahadceliyey dowladda Shiinaha taageerada iyo kaalinta ay ka qaadato ilaalinta midnimada iyo ixtiraamidda madax-bannaanida Soomaaliya.